Umnotho wesikali: uyini, izici, ukuthi usebenza kanjani futhi uthayipha | Ezezimali Zomnotho
Encarni Arcoya | 28/06/2021 09:44 | Umnotho jikelele
Cabanga ukuthi unenkampani yezingxenye. Futhi lokho, ngokungazelelwe, esikhundleni sokukhiqizwa kwezicucu eziyi-100 ngosuku, unesigidi. Ngokusobala, njengoba ukhiqiza okuningi, izindleko zempahla zizobe ziphansi, ngoba uzothenga okuningi. Kepha uma kukhulunywa ngokuthengisa imikhiqizo yakho, uzoyenza ngentengo efanayo. Futhi ngokuthengisa okuningi, uzothola izinzuzo ezinkulu ngaphansi kwezindleko eziphansi, uyaqonda? Yebo, leso sibonelo esikunikeze sona yilokho okuba ngumnotho wezinga.
Uma ufuna funda kabanzi ngomnotho wesikali, izinhlobo ezikhona, ukuthi zisebenza kanjani nezinye izici zalesi simiso sezomnotho, khona-ke sizokhuluma ngakho konke lokhu ngokuningiliziwe.
1 Uyini umnotho wesikali
1.1 Umnotho wezinga noma umnotho wezinga
2 Izici zomnotho wesikali
4 Izinhlobo zezomnotho zesikali
4.1 Umnotho wangaphakathi wesikali
4.2 Umnotho wangaphandle
Uyini umnotho wesikali
Umnotho wesikali ungachazwa njenge- isimo lapho inkampani inyusa ukukhiqizwa futhi inciphisa izindleko. Ngamanye amagama, kuyisu elizama ukwehlisa izindleko nezindleko kuze kube sezingeni eliphezulu, futhi lokhu, kwandisa ukusebenza kwenkampani, okwenza umkhiqizo ube mkhulu.
Manje, kufanele kuqondwe ukuthi inzuzo yalokhu kwehliswa kwezindleko ayenziwa nje ukuthi izinto zokusetshenziswa zithengwa zishibhile ngokwandisa ivolumu yazo, kodwa ngoba impahla noma insiza ethengiwe isetshenziselwa ukuyixhaphaza kakhulu ngangokunokwenzeka.
Isibonelo, ake ucabange ukuthi wenze utshalomali emshinini. Indlela yokuyihlela ngokushesha okukhulu ukukhiqiza okuningi ngayo. Lapho ungakwazi ukukhiqiza okuningi, uzosheshe ukhokhele umshini, futhi ngemuva kwalokho uzoqala wenze inzuzo 'ehlanzekile'.
Umnotho wezinga noma umnotho wezinga
Wake wezwa ngobubanzi bezomnotho? Abaningi babheka ukuthi womabili la magama ayafana, kepha iqiniso ukuthi awawona.
La Umnotho wezinga ubhekisa emigqeni ehlukene yokukhiqiza yenkampani. Ngamanye amagama, ziyizindlela ezahlukahlukene obekufanele ukhiqize ngazo umkhiqizo. Uma noma iyiphi yale mizila yokukhiqiza ingasebenzi, iyavalwa noma incishiswe ukuze kwandiswe ukukhiqizwa kwabanye okwaziwa ukuthi kunenzuzo.
Izici zomnotho wesikali
Ngemuva kwalokhu esikutshele khona, siyabona ukuthi umnotho wezinga ukhonjiswa:
Ukwehliswa kwezindleko zeyunithi zemikhiqizo. Ngamanye amagama, ucezu ngalunye olwenziwa inkampani lunezindleko X. Uma ukukhiqizwa kukhuphuka, leyo ndleko iyehla, ngoba njengoba umkhiqizo ukhuphuka, izindleko zizokwehla.
Kungenziwa kuphela ezinkampanini ezinkulu, ikakhulukazi ukuthi babhekana nokutshalwa kwemali okukhulu futhi izinzuzo zabo ezingekho esikhathini esifushane, kepha esikhathini esimaphakathi nesikhathi eside.
Thuthukisa isivumelwano phakathi kwabahlinzeki. Yize kuthiwa ukwehliswa kwezindleko zezinto zokwakha umkhiqizo akuphazamisi, kuyenzeka ngoba, ngokuba ne-oda ephezulu yevolumu, evumela abakhiqizi ukuthi behlise intengo yento, ngalokho izindleko zalowo mkhiqizo kuzoncishiswa. Isibonelo, uma impahla eluhlaza ibiza i-euro eyodwa, kepha esikhundleni se-100 uthenga isigidi, kunengqondo ukucabanga ukuthi intengo izokwehla, ngokwesibonelo iye kumasenti ayi-10, konga amasenti angama-90 ngeyunithi ngayinye.
Kukhona ukuzethemba okukhulu. Ukuncintisana kakhulu (ngoba awufuni ukuthi umkhiqizo ukhuphuke futhi nalokhu ungakwazi ukusebenzela amakhasimende akho ngokushesha), lokhu kuzokwenza abatshalizimali nabo bakubone, nokuthi uma be-oda imikhiqizo, bacabanga ngawe kuqala ngoba uyashesha.
Yize uzobe usunombono wokuthi umnotho wesikali usebenza kanjani, akulimazi ukuma kancane kuleli qophelo ukukhuluma ngakho. Lokhu ikakhulukazi kusekelwe ezindlekweni ezihleliwe nasezingeni lokukhiqiza. Inhloso ukunciphisa lezi zindleko ezingaguquki ziye phezulu futhi, ukwenza lokhu, ukwandisa izinga lokukhiqiza. Ngakho-ke, umphumela otholakalayo ukuthi kutholakala imikhiqizo eminingi, kepha ngentengo ephansi (kusobala ngaphandle kokulahlekelwa ikhwalithi yalokho okwenziwayo).
Kuyinto a inzuzo yokuncintisana izinkampani ezinkulu kuphela ezikwazi ukuyizuza, ukudlala ngezindleko eziguqukayo (izindleko zento eluhlaza ukwenza imikhiqizo).
Ukwenza lokhu, kufanele kubhekwe ukuthi kufanele kube umkhiqizo ongathengiswa ngokushesha, noma okungenani lokho akusho ukuthi unendawo yokugcina izinto egcwele izingxenye, nganoma yisiphi isikhathi, ezingonakala noma "ziphelelwe isitayela ". Ngalesi sizathu, lapho kuhlelwa leli qhinga, kuyadingeka ukwazi imiphumela ehlukile yalowo mkhiqizo owengeziwe okhiqizwayo.
Izinhlobo zezomnotho zesikali
Ngaphakathi kwezomnotho wesikali kufanele ukhumbule ukuthi ayikho eyodwa kuphela, kepha izinhlobo eziningi. Ngokuqondile, kukhona okulandelayo:
Umnotho wangaphakathi wesikali
Yilokho okwenzekayo ngaphakathi kwenkampani efanayo. Empeleni, yiso esaziwa kakhulu ngoba lolu hlelo yilolo olusetshenziswa izinkampani ezinkulu, noma lezo ezikhiqiza izingxenye ezithile noma izingxenye ezithile zokuhlinzeka imikhakha eyahlukahlukene, eziyenzayo.
Imvamisa leli qhinga liyasetshenziswa enkampanini, cishe ngaso sonke isikhathi lisebenzisa amasu amasha wokukhiqiza ngenhloso yokusebenzisa utshalomali oluncane kakhulu ukuthola umkhiqizo omkhulu.
Izalwa ngezinto zangaphandle, kwesinye isikhathi ezingahlobene nenkampani uqobo, njengosayizi wemboni. Phakathi kwezinto ezingathinta indawo, ezenhlalo nezombusazwe, ezomnotho, namasiko ...
Isibonelo, ngaphakathi komnotho wangaphandle wesikali kungaba intela inkampani enayo ezweni elithile, noma indlela yokukhokha intela kulelo zwe. Uma kwenye kushibhile, futhi ngayo uzonciphisa izindleko, into ephephe kakhulu ukuthi uthuthele lapho ungathola khona izinzuzo ezinkulu kakhulu.
Manje, lokhu kuzobhekwa ngasohlangothini "olubi", ngoba kukhona futhi okuhle (izinsiza zokuxhumana ezingcono, izinto zokusetshenziswa, imigwaqo yokusatshalaliswa) okuyizinto zangaphandle kepha ezinomthelela enkampanini.
Manje njengoba usuwuqonda kangcono umnotho wezinga, uyazi ngezinkampani ezinkulu ezikwenzayo?
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Umnotho wezinga